နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အေဆမ်မိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ | Dwave
Home သတင်းကဏ္ဍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အေဆမ်မိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အေဆမ်မိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် (၁၃)ကြိမ်မြောက် အေဆမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် အေဆမ်မိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင်များအား နိုဝင်ဘာ၂၁ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန-၁ ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဆွီဒင်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mrs. Margot Elisabeth WallstrAm နှင့်အဖွဲ့အား နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင်လည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Affairs Ministry of External Affairs မှ Minister of State for Foreign H.E. Mr. Vijay Kumar Singh နှင့်အဖွဲ့အား မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင်လည်း ကောင်း၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ Ministry of Foreign and European Affairs မှ ၀န်ကြီး H.E. Mr. Jean Asselborn နှင့်အဖွဲ့အား မွန်းလွဲ ၂နာရီခွဲ တွင်လည်းကောင်း လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် နော်ဝေနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး H.E. Mrs. Ine Marie Eriksen Soreide နှင့်အဖွဲ့အား မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲတွင် လည်းကောင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Federal Department of Foreign Affairs မှ State Secretary H.E. Mrs. Pascale Christine Baeriswy နှင့်အဖွဲ့အား ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင်လည်းကောင်း၊ ပိုလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန Undersecretary of State, H.E. Mr. Marek Magierowski နှင့်အဖွဲ့အား ညနေ ၅ နာရီတွင် လည်း ကောင်း သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အလားအလာတို့ကို ဆွေးနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ကြသည်။